Taylor Swift - Tarisa Zvawakaita Me Do - VipCasting.cz
Taylor Swift - Tarisa Zvawakaita Ndakaita
Do, tsvaka, Made, Me, Taylor Swift, chii, iwe
Taylor Alison Swift (* 13. December 1989) ndiroAmericanmuimbi, munyori wenziyo uye munyori. AkakuriraWyomissing v Pennsylvaniauye paine gumi nemana akatamira kuneNashville v Tennessee, kwaakazotanga basa rake remimhanzi semuimbi wepamu nyika. Akasaina chibvumirano neimba yakazvimirira yekudhindaBig Machine Recordsuye akazova munyori wenziyo mudiki pane ose akamborayirwa neimba yekudhindaSony / ATV Music Publishing. Ndangotanga kusunungurwa kwekutanga kwakeeponymous album (Taylor Swift) mu2006 yakazova nyeredzi yemimhanzi yenyika. Wechimwe chechitatu "Rwiyo Rwedu"Akaita kuti ave munyori muduku pane vose akanyora pasina rubatsiro uye akasunungura rwiyo rwakatanga kutanga muBillboardHot Country Songs. AkasarudzwaGrammy AwardmubokaBest Artist Artist(Best Best Artist) mugore2008.
Yechipiri albumsatyisayakasunungurwa pamagumo egore 2008. Yakatsigirwa nehubudirira hwemasles "Love Story"Uye"Iwe Unogova neni"Mumataiti akabaya albumpop crossovervateereri uye vakazova album yakatengesa zvikuru yegore 2009. Iyo album yakawana mana Grammy Awardsmu 2010, kuburikidza ne Swift kuva mucheche wechidiki muGrammy mu "Album yeMwaka". Bhuku rake rechitatuTaura ikozvinoyakasunungurwa pamagumo e2010 uye yakatengesa zviyero zvinopfuura mamiriyoni muvhiki yekutanga yebhuku. Nenguva iyo yakabva yaenda kune imwe mwedzi gumi namatatuTaura Iye zvino Nheyo Yenyika, kwaakamboita pamitambo yakasiyana-siyana uye akakwezva mamiriyoni evhumu kuburikidza ne1,6. Yechitatu yechinyorwa che album "Zvinoreva"Won maviri Grammy. Bhuku rechina re Taylor Taylor rinodanwaTsvukuuye yakabudiswa 22. October 2012. Pilot single "Hatimbofi Tichidzoka Pamwe Chete"Akava wake wokutanga asina kuroora kusvika kumusoro kwekeriBillboardHot 100. Nhamba yeNorth AmericaKuratidzwa Kvukuyakatanga muna March we 2013. Taylor's latest album 1989 yakabudiswa pamagumo e2014 uye rwiyo runonyanya kubudirira mubhuku rakazovaItai Izvozvi. Akakundawo Grammy mu "Album yeMwaka" ne "Best Vocal Album" zvinyorwa.
Taylor Swift anowanzotsanangurwa se "mudiwa weAmerica" ​​uye anozivikanwa nenziyo dzaanogara achiimba nezverudo. Mimhanzi inowanzotaura nezvemimhanzi ine zvinyorwa zvinyorwa uye mitambo inobata, izvo zvinoita kuti zvive nyore pakarepo kupinda mukunzwisisa.haka) Somunyori wenziyo, akapiwa chikamuNashville Songwriters Associationuye masanganoSongwriters Hall of Fame. Betweenmamwe maitiro a Taylor SwiftMamiriyoni Grammy Awards, Makumi nemashanuAmerican Music Awards, manomweCountry Music Association Awards, matanhatuAcademy ye Country Music Awardsuye gumi nematatuBMI Awards. Mukufamba kwebasa rake, akatengesa zviuru zvemakoromusi kuburikidza ne22, uye mamiriyoni emimhanzi akachengetwa paIndaneti kuburikidza ne50. Mukuwedzera kumabasa ake emimhanzi, Taylor Swift zvakare akaedza kuita sechiremba, achionekwa mune imwe nyaya yeThe Crime yeLas Vegas mu2009, mumutamboNa sv. Zuva reValentine(2010) uye vataure firimuThe Lorax(2012).Forbesanofungidzira kuti akawana mamiriyoni emadhora mubasa rake kuburikidza ne165. pagore2013akawana mamiriyoni emadhora gumi nemamiriyoni (mamiriyoni ane mamiriyoni e40), ayo aiva mazhinji pakati pevanhu mumabhizimisi emimhanzi.
Taylor Swift inotsigira Arts dzidzo, kuverenga nevana kwakaitawo kubatsira dzinongoitika dzoga, anosimudzira kodzeroLGBTuye rudo rwevana vanorwara.